आज्ञासंग निराजनको 'के लेखु शब्दमा'
आज्ञासंग निराजनको ‘के लेखु शब्दमा’
प्रकाशित : बिहिबार, चैत १९, २०७७१६:४५
संगीत । सुरज शाही ठकुरीको संगीत र स्वर रहेको गीत ‘के लेखु शब्दमा’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा जंग बहादुर शाही र अमृत घोले लामाको शब्द रेको छ । आफ्नो प्रेमीकालाई माया भावले वर्णन गर्ने गीतको भिडियोलाई आकर्षक बनाइएको छ । गीतमा आफ्नो प्रेमिका प्रतिको प्रेमभावलाई दर्शाईएको छ । गीतलाई अडियो झैँ आकर्षक रुपमा एजिएल इन्टरटेनमेन्टले तयार गरेको छ ।
एजिएल प्रमुख अमृतले गीतको शब्द अनुरुपकै भिडियो तयार गरिएको बताए । ‘गीतको शब्दलाई दृश्य मार्फत अनि प्रस्ट्याउने जमर्को गरेका छौं’ उनले भने । गीतमा लोकप्रिय मोडल निराजन प्रधानसंग डेब्यु गर्ल आज्ञा करन्जीत फिचर्ड छिन । पछिल्लो समय नायक अनमोल केसीसंग फिल्म ‘पारस’ मा अभिनय गर्ने चर्चामा रहेकी आज्ञाको यो डेब्यु गीत हो ।
गीतको सार्वजनिक भिडियोमा आज्ञासंग निराजनको प्रेमभावलाई दर्शाईएको छ । एकअर्का प्रतिको प्रेमलाई लिएर भिडियोलाई शान थापाले तयार गरेका हुन् । एजिएल इन्टरटेनमेन्टकै युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको गीतको भिडीयोमा राजीव समरको कोरियोग्राफी , अर्जुन तिवारीको छायांकन , सुप्रिम पराजुलीको सम्पादन रहेको छ । भिडियोलाई एजिएल इन्टरटेनमेन्टका लागि अमृत घोले लामाले निर्माण गरेका हुन् ।
रनबीरले लगाएका थिए ‘लभ आजकल’ फ्लपको अनुमान ?
‘सूर्यवंशी’ रिलिज रोकिने ?
युगेशले ल्याए एकसाथ दुई गीत (भिडियो)
परितोसिकालाई सकारात्मक प्रतिक्रिया
सलमानको ‘केमियो’ बारे बोले साहो निर्देशक